Caalamka, 01 December 2017
Khamiis 1 December 2017
Weerar culus oo lagu qaaday jaamacad ku taal Pakistan
Koox ismiidaamiyayaal ah oo ka kooban afar qof ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyi galbeed ee dalka Pakistan, halkaasi oo ay ku dileen 9 qof, kuna dhaawaceen in ka badan 35 kale.
Afghanistan: Dagaallo ka dhex qarxay Daalibaan iyo Daacish
Dagaalo xooggan oo malamo socday, kuwaas oo dhex maray kooxaha Daaliban iyo Daacish ee dalka Afghanistan, ayaa lagu soo warramayaa in labada dhinacba ay khasaare xooggan gaarsiiyeen.
Erdogan oo musuq maasuq lagu eedeeyey
Hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Turkiga ayaa soo bandhigay wax uu ku tilmaamay caddeeymo muujinaya in malaayiin dollar oo ku jira Akoonno dibadda ah oo lala xiriiriyay madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan.
Australia: Soomaali lagu soo oogay kiis argagixisanimo
Booliska dalka Australia ayaa ku eedeeyay nin asalkiisu Somaali ah oo u dhashay dalka Australia inuu qorsheynayay weerar argagixiso oo uu ka geysto magaalada Melbourne, xilliga dabaal degga sanadka cusub.
Turkiga oo sugaya in Mareykanku oofiyo ballantii uu qaaday
Dalal Islaam ah oo ka shiraya arrimaha argagixisada
Magaalada Riyad ee dalka Sacuudiga waxaa ka furmay kulan ay leeyihiin Isbahaysiga dalalka Islaamka ee la dagaallanka argagixisada, waxaana ka qeybgalaya 41 waddan oo Somalia ay ku jirto.
Qarax Ka Dhacay Shiinaha
Qarax ka dhacay magaalada xeebeedka Ningbo ee Bariga dalka Shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba ruux, halka ay ku dhaawacmeen tobneeyo kale.
Sacuudiga oo u ogolanaaya Yemen in gar-gaar lageeyo
Isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay in ay dekedaha iyo garoomada diyuuradaha Yemen u furayaan gaadiidka sida gargaarka bani-aadanimo.
Mucaaradka Zimbabwe oo war soo saaray
Xisbiga ugu weyn mucaaradka Zimbabwe ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalkaasi, inuu burburiyo tiirarkii musuqmaasuq ee maamulkii madaxweyne Mugabe.
Sacad Xariiri oo hakad heliyay is-casilaaddiisii
Reysal wasaaraha Lubnaan, Sacad Al Xariiri, ayaa sheegey Arbacada maanta in uu dib u dhigayo is casilaaddiisa, kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun. uu sidaas ka dalbaday.
Hoggaamiyihii Maafiyada Talyaaniga oo geeriyooday
Hoggaamiyihii kooxda Maafiyada Talyaaiga Salvatore ‘Toto' Riina ayaa ku dhintay isbitalka xabsi ku yaalla magaalada Parma, kadib markii uu muddo la dagaalamayey cudurka cancer-ka. Waxa uu ahaa 87 jir.
Saad Hariiri oo aqbalay inuu u safro Faransiiska
Ra’iisul wasaaraha Lebanon Saad Hariiri ayaa aqbalay yabooh ku saabsan inuu u safro dalka Faransiiska maalmaha soo socda, taasi oo ah dhacdadii ugu dambeysay ee ku hareereysan ku dhawaaqistiisa inuu xilka iska casilay horaantii bishan.